आँचललाई मिलनकै फिल्म कुर्नुपर्ने हो ? – झुल्केघाम
आँचललाई मिलनकै फिल्म कुर्नुपर्ने हो ?
फाल्गुन ११ १२:४३ १०७
बिर्तामोड , फागुन ११ । लकडाउन सकिएलगतै कलाकारहरु चलचित्रको काममा फर्किन थालेका छन् । नायिकाहरु सुहाना थापा, जसिता गुरुङ, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, वर्षा सिवाकोटी लगायतले चलचित्रको छायांकन सकिसकेका छन् ।
नायिका शर्मालाई भने नयाँ चलचित्रको अफर गएको चर्चा छैन । बरु, उनी आफैले निर्माण गर्नेगरी निर्देशक मिलन चाम्सले नयाँ चलचित्र बनाउने चर्चा सुरु भयो । मिलनले बनाउन लागेको ‘गोर्खा वारियर २’मा आँचलले काम गर्ने हल्ला चलचित्र बजारमा छ । तर, यो पक्का भैसकेको छैन ।
स्वस्तिमा खड्का, पूजा शर्मा लगायतका नायिकाहरु नयाँ चलचित्रको छायांकनको तयारीमा छन् । नायिका केकी अधिकारीले ‘बोक्सीको घर’को काम सुरु गरिसकेकी छिन् । तर, केही नायिकाहरुको हातमा भने नयाँ चलचित्र नै छैन ।
नायिका आँचल शर्माले गतबर्ष चलचित्र ‘झिंगे दाउ’मा काम गरिन् । यो चलचित्रको छायांकन सकिएपछि आँचलले बिहे गरेकी थिइन् । बिहे लगतै लकडाउन भएपछि करिब १० महिना चलचित्रको काम सुनसान नै बन्यो । तर, लकडाउन खुकुलो भएपछि कलाकारहरुले धमाधम चलचित्र साइन गरिरहेका थिए ।
यसैले, पनि आँचलले नयाँ चलचित्रका लागि मिलनसँगको सहकार्यलाई नै पर्खिनुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । म्यूजिक भिडियोमा आँचलको गज्जबको क्रेज छ । तर, चलचित्र बजारमा उनको उपस्थिती खासै सुखद देखिएको छैन ।